Ogaden News Agency (ONA) – Ujeedada uu ka leeyahay dhiigyacab Meles laynta dadka shacabka ah – dhacdada Xamaro –
Ujeedada uu ka leeyahay dhiigyacab Meles laynta dadka shacabka ah – dhacdada Xamaro –
Markaad u kuurgasho fal-dambiyeedka ay maxaysatada Cabdi iley u gaysanayaan dadka shacabka ah waxaad ogaanaysaa in aanay ahayn arin iska timid ama ay iskood u fulinayaan kuwan lagu shaqaysanayo ee loo soo diray inay shacabka gacantooda ku xasuuqaan. Baadhitaan aan ka samaynay anagoo isku xidhnay dhacdooyinka siday u socdaan iyo wararka laga soo sheegayo gacan-ku-dhiigle Meles, waxaan ogaanay ujeedada ka dambaysa inay tahay un in shacabka la jeclaysiiyo ciidanka Itobiya oo dhankooda ay uga cararaan kana magan galaan maxaysatada Cabdi iley. Dad xog-ogaal ah oo yaqaana tabaha uu adeegsanayo xisbiga Wayaanaha markaan weydiinay hadafka uu gacan-ku-dhiigle Meles ka leeyahay falalkan jariimada ah waxay isku raaceen inay tahay in shacabka Ogadenya la ogolaysiiyo gumaysiga oo iyagoo raali ah ay ciidanka Itobiya soo magan galaan marka la tuso arxandarida kuwii ay garanayeen. Iyagoo raaciyay marka ay hawshaa fuliyaan kooxda Cabdi ilay uu horboodayana dhabarka loo saari doono xadgudubyadii loo gaystay dadka shacabka ah.
Waxyaabaha qaarkood markaad maqasho waxaad ogaanaysaa in aanay suurtagal ahayn inay tahay ujeeda la’aan. Bal dhacdadan habeen hore magaalada Xamaro ka dhacay u fiirso. Waxay dad xog ogaal ahi sheegayaan in xasuuq aad u fool xun loogu gaystay magaalada 3ex gabdhood inta la hubo, iyadoo gabadh kalena ay sakaraad mayd ahaan uga tageen, kuwo kalena ay u xidhanyahiin.
Gabadhaha ayaa 3ex ka mid ahi waxay lahaayeen ciyaal sida la xaqiijinayo waxaana laga qab qabtay guryahooda ka dibna inaty kufsadeen ayay si xun u silic dileen maydkoodana kaga tageen duleedka magaalada. Falkan foosha xun waxaa gaystay maxaysatada Cabdi iley ee loo yaqaano hawaarinta.
1. Sabaad Muxumed Cade
2. Sawda Cabdi Garaad
3. Faadumo oo aan magaceeda oo buuxa helin
4. Maadh Macalin Muxumednuur oo ahayd tan ay mayd ahaanta uga tageen laakiin markii danbe dhaawac noqotay.
Ujeedada dhiigyacab Meles waa siduu u sheegay saxafigii ka warmayay xaalada Ogadenya ee yidhi ciidanka Itobiya markay ka adkaan waayeen ONLF ayay bilaabeen fikradda ah ( Drain the pool to catch the fish –Baliga ka madhi biyaha saad kaluunka u soo qabsato -). Waana fikrad gabowday oo gumaysi oo idil uu soo tijaabiyay hasa ahaatee aanu ku guulaysan, ugu dambayntiina ku dambaysay in gacan ku-dhiiglayaasha la horkeeno cadaaladda oo la mariyo mudankooda. Wayna iman Ilaahay idankii. Adkaysi iyo mintidnimo ayaana looga gudbaa.
waad mahadsantahay mudane maamulaha webka dhadadan xanuunka leh ee aad noo soo gudbisay waxa aan leeyahay dadkaygoow guntada oo gurmada gumaysigaa madoow geeri oogu wanqala guushu way imaan insha allaah waxa aan leeyahay dadkaygoow isku duubnaada waynu gaadhi xornimada insha allaah